See More… – Page2– News,Knowledge,Funny,Lifestyle,Cele
Man United Up Date Newspaper
အာဆင်နယ် နဲ့ မန်ယူ ဘယ်ကို ပြောင်းရွှေ့မယ် ဆိုတာ အတည်ပြု ပေးလိုက်တဲ့ မာတီနက်ဇ်
June 30, 2022 Anonymous
အေဂျက်ဇ် အဓိက ကစားသမား တဦး ဖြစ်သူ မာတီနက်ဇ်က ယခု နွေဈေးကွက် အတွင်းမှာ အာဆင်နယ်နဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အပြိုင် ကမ်းလှမ်းမှုကို ရရှိထားပေမယ့် အာဆင်နယ်ကို ပြောင်းရွှေ့ရန် စိတ်မဝင်စားကြောင်း သိရပါတယ်၊ ၎င်းက အဲရစ် တန်ဟက်ဂ် ရှိနေတဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ကို
ဒီဂျောင်ကို ကြိုဆိုဖို့ ထုံးတန်း အစဉ်အလာရဲ့ အလွန်ကို ကျော်ဖြတ်ရန်အထိ ပြင်ဆင်နေတဲ့ မန်ယူ
June 29, 2022 Anonymous
ပရီးမီးယားလိဂ် အင်အားကြီး ကလပ် အသင်း တသင်း ဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ဘာစီလိုနာ ကွင်းလယ် ကြယ်ပွင့် ဖြစ်သူ ဖရန်ကီ ဒီဂျောင်ကို ခေါ်ယူဖို့ ဘာစီလိုနာနဲ့ရော၊ ကစားသမားနှင့်ပါ ပဏာမ သဘောတူညီမှု ရယူထားနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယခု အချိန်မှာ
Bay Din Hall Sa Tan
ဆရာငြိမ်း 30.Jun.2022 မှ6.July. 2022 အထိတစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း ..
(Unicode) 30.Jun.2022 မှ6.July. 2022 အထိတစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း #တနင်္ဂနွေ ဒီအပတ်အတွင်း ခေါင်းရှုပ်စရာလေးတွေတော့ အနည်းငယ်ကြုံနေရတတ်ပါတယ်။ သူတစ်ပါးပြောစကား တွေကိုချင့်ယုံပါလို့လဲ မှာချင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ အတွေးမှား အလုပ်မှားတွေကြောင့်သာ ဒီအပတ်အတွင်းအဆင်မပြေမှု တွေကိုဖြစ်စေ တာတွေ့ရပါတယ်။ တတ်နိုင်သမျှ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ သွားရောက်ပျော်ပါးခြင်း
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ 30 ရက်နေ့အတွက် ဆရာဇင်ယော်နီဟောကြားထားသော ၇ ရက်သားသမီးများရဲ့ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန် နှင့် ကံကောင်းခြင်းအတွက် အဆောင်ယတြာများ…
တနင်္ဂနွေသားသမီး – အိမ်တွင်းရေး၊ မိသားစုရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ အချစ်ရေးတွင် စိတ်ရှုပ်ရတတ်ပါသည်။ အချင်းချင်း အထင်လွဲမှားစရာများ ပေါ်ပေါက်တတ်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းတွင်း အဆင်မပြေမှုများ ကြုံရတတ်ပါသည်။ ကံကောင်းစေမည့် ဂဏန်းမှာ ၆၀ ဖြစ်ပါသည်။ ကံကောင်းရန် သစ်ပင် ပန်းပင် စိုက်ပျိုးလှူဒါန်းခြင်း ပြုပါလေ။ တနင်္လာသားသမီး – ရန်အန္တရာယ်
မိတ်ဆွေတို့ ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်းပါ။ (ဇွန် ၂၉ မှ ဇူလိုင် ၅)
မိတ်ဆွေတို့ ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်းပါ။ (ဇွန် ၂၉ မှ ဇူလိုင် ၅) ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော်ဝ် … #ဇင်ယော်နီ SUN MON TUE WED THU FRI SAT
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်အတွက် ခုနစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးအတွက် တစ်နေ့တာဟောစာတမ်းနှင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် ယတြာမျာ..း
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်အတွက် ခုနစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးအတွက် တစ်နေ့တာဟောစာတမ်းနှင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် ယတြာများ SUN MON TUE WED THU FRI SAT
အသင်းရှိ ကစားသမားများကို အသုံးပြုရန်ထက် ဒီဂျောင်နှင့် အသင့်တော်ဆုံးလို့ ယုံကြည်တဲ့ တွဲဖက် ကြယ့်တစ်ပွင့်ကို ခေါ်ယူဦးမည့် အဲရစ် တန်ဟက်ဂ်
ဖရန်ကီ ဒီဂျောင် ကို ခေါ်ယူရန် သဘောတူညီမှု ရရှိပြီးနောက် အဲရစ် တန်ဟက်ဂ်က ကွင်းလယ်တွင် ဒီဂျောင်နှင့် တွဲဘက် အဖြစ် အသုံးပြုရန် အတွက် လက်စတာ အသင်းမှ ဘယ်ဂျီယမ် ကွင်းလယ်လူ တီလီမန်းစ်ကို စိတ်ဝင်စားနေ ကြောင်းသိရပါတယ်။ တီလီမန်းစ်ဟာ အဲရစ် တန်ဟက်ဂ် အလိုရှိတဲ့
သူ အလိုရှိတဲ့ အနေအထား တရပ်ကို ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ ဒီဂျောင်ရဲ့ ဆန္ဒကို တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ အဲရစ် တန်ဟက်ဂ်
Manchester United အသင်းဟာ Frenki de Jong ကို မကြာမီ ခေါ်ယူရန် မျှော်လင့်နေပြီး Erik ten Hag လက်ထက်မှာ သူ့ကို မည်သို့ အကောင်းဆုံး အသုံးချရမည်ကို သိရှိထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United ဟာ ဖရန်ကီ ဒီဂျောင်ကို
ဒီဂျောင် မရောက်မီမှာပဲ စူပါ ထူးရှယ် တဦးကို ခေါ်ယူနိုင်တော့မည့် မန်ယူ၊ မကြာမီ တရားဝင် ကြေငြာသွားဖွယ် ရှိလာ
နယ်သာလန် နာမည်ကြီး ကလပ် ဖီယင်နု ကြယ်ပွင့် ဖြစ်သူ အဓိက ဘယ် နောက်ခံလူ မာလာစီယာက ၎င်းကို ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ လိုင်ယွန်နဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်တို့ နှစ်သင်း အနက် လိုင်ယွန်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းဆန်လိုက်ပြီး မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်
ဒါ‌‌ဘီကောင်တီ အသင်း နဲ့ လမ်းခွဲအပြီး ပရိတ်သတ် အချစ်ကို နောက်ထပ် နည်းလမ်း တခုနဲ့ ရယူသွားဦးမည့် ဝိန်းရွန်းနီ
June 28, 2022 Anonymous
လိဂ်ဝမ်း ကလပ် ဒါဘီ ကောင်တီ အသင်းနဲ့ လက်တွဲဖြုတ်လိုက်တဲ့ နည်းပြ ဝိန်းရွန်းနီဟာ လက်ရှိမှာ အသင်းလက်မဲ့ ဖြစ်နေပြီး ၎င်းကို ကလပ် အသင်း တချို့က ခေါ်ယူချင်နေကြတဲ့ အပြင် Sky Sports, BT Sport, BBC, ITV စတဲ့ ဗြိတိန်
Previous 123 … 374 Next
Suggested for u